भारतमा पूनर्बीमा कम्पनी खोल्न निजी क्षेत्रले गर्यो प्रस्ताव, के वैदेशिक लगानीको पूनर्बीमा कम्पनीले इजाजत पाउला ? – Insurance Khabar
भारतमा पूनर्बीमा कम्पनी खोल्न निजी क्षेत्रले गर्यो प्रस्ताव, के वैदेशिक लगानीको पूनर्बीमा कम्पनीले इजाजत पाउला ?
प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहीबार ०६:०८
काठमाडौं । भारतमा विदेशी लगानी सहित निजी क्षेत्रको पहिलो पूनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागी नियामक निकायसमक्ष निवेदन दिएको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी गो डिजिट जनरल इन्स्योरेन्सको व्यापारिक साझेदार क्यानडाको प्रसिद्ध फेयरफ्याक्स समूह र भारतीय प्रवद्र्धक कमलेश गोयलले भारतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पूनर्बीमा कम्पनी संचालन गर्न इजाजत पत्रको लागी भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई ) मा निवेदन दिएका हुन् ।
दुई पक्षले पूनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न हालको न्यूनतम पूँजी भारु २ अर्ब ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको दोब्बर पूँजी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भारत सरकारले बीमा कम्पनीहरुमा ७० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको छ । भारतमा वैदेशिक संयुक्त लगानीमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु संचालनमा रहे पनि सरकारी स्वामित्वको पूनर्बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (जिआइसी) मात्र संचालनमा रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले संयुक्त वैदेशिक लगानीमा पूनर्बीमा कम्पनी संचालन गर्ने आवेदन दिएपनि यो आइआरडिएआइको स्वीकृतिको विषय भएको भारतीय अनलाइन संचार द बिजनेश स्टाण्डर्डले उल्लेख गरेको छ । जिआइसी रि पूनर्बीममकले भारतीय निर्जीवन बीमकहरुबाट सरकारी संरक्षणमा अनिवार्य बीमा अन्तर्गत निश्चित प्रतिशत पूनर्बीमा व्यवसाय प्राप्त गर्दै आएको छ।
१ अप्रिल २०२२ देखि, राज्यको स्वामित्वमा रहेको पुनर्बीमा कम्पनी जिआइसी रि सँग पुनर्बीमा गरिएको प्रत्येक निर्जीवन बीमालेखको लागि अनिवार्य बीमा पूनर्बीमाशुल्कको ४ प्रतिशत रहेको तोकिएको छ। यसअघि यो पाँच प्रतिशत रहेकोमा यसवर्षदेखि ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । जिआइसी रिलाई आइआरडिएआइले भारतीय पूनर्बीमा व्यवसायको प्रस्ताव स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने पहिलो अधिकार दिएको छ।
जिआइसी रि बाहेक, भारतमा १० वटा विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीका शाखा संचालनमा रहेका छन्।